Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Uganda Airlines New Inflight Menu: Iintethe?
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba zaseUganda
Uza kwimenyu ye-Uganda Airlines kungekudala?
Iintloni ziimpendulo eziye zasasazeka kumajelo eendaba ezentlalo eziye zahlekisa ngabantu baseUganda beza nengxelo efihliweyo apho, ngelixa wayekhalimela umkhweli ophambukayo, inqwelomoya yacebisa ukuba yongeze. ubumnandi basekhaya Nsenene (iintethe ezineempondo ezinde) kwimenyu yazo kwiinqwelomoya zengingqi nezamazwe ngamazwe.
“Sikhethe izifundo kwesi siganeko. Abanye babathengi bethu bayayonwabela iNsenene,” ifundeka ingxelo yenkampani yenqwelomoya. “Sicinga ukongeza uNsenene, ukutya okumnandi kwaseUganda, kwimenyu yethu yeenqwelomoya zengingqi nezamazwe ngamazwe xa iceliwe. Oku kongezwa kweNsenene kuya kuzisa inkcubeko yaseUganda kwihlabathi. Eli nyathelo liza kukhulisa ukuthengiswa kokhenketho kunye nokuphila kwabantu abakwishishini leentethe ukuya phambili. "
I-Uganda Airlines, nangona kunjalo, ilumkise malunga nokuphinda kwenzeke oko kuhambo, ilumkisa ukuba ukuveza abakhweli kumava orhwebo angalawulekiyo ebhodini kuya kubangela ukuba umkhweli akhululwe ngaphandle kokuqwalaselwa ngakumbi.
Umanejala wezoBudlelwane beenqwelomoya zaseUganda, uShakira Rahim, uthe kudliwanondlebe lukamabonakude kwi-NTV ukuba inqwelomoya iza kumbuza umkhweli ekubuyeni kwakhe ukuze ithumele umqondiso kubakhweli abaziphatha ngendlela engathandekiyo ebhodini. Uthethelele iqela labasebenzi awathi bazamile ukunqanda le ndoda ukuba inike ithuba abakhweli. “Awunakuyenza loo nto kwinqwelomoya yamazwe ngamazwe, kuba kukho abakhweli abaza kuqhubeka nohambo lwabo kwenye indawo. Ukutya okungakhange kudlule kuvavanyo lwethu olusemgangathweni kunye nomgangatho akuvumelekanga ukuba kukhwele; ngumba lowo, kwaye ngumgangatho lowo,” utshilo uRahim.
Ethetha ngendlela efanayo, uManejala weMicimbi yoLuntu kwiGunya lezoPhapho lwaseUganda, uVianney Lugya, wathi: “Iintethe azikho kuluhlu lwezinto ezingavumelekanga. Ke ngoko, ayingomcimbi wokhuseleko ukuba iintethe zaphelela kwinqwelo-moya. Ekuphela komcimbi omawujongwe yindlela umkhweli aziqhuba ngayo kwinqwelomoya. Ekuphela kwemeko ejongwayo kukuba ilizwe apho inqwelomoya iyayithintela loo nto. ”
Umphathiswa onomsindo wezemiSebenzi noThutho, uNjengele Katumba Wamala, owela phantsi kwedokethi yakhe le nkampani yeenqwelomoya, akazange athethe amazwi akhe ngokubetha isabhokhwe ngokuyalela ukuba kuthathwe amanyathelo oluleko kubasebenzi abebesemsebenzini ngexesha lesehlo. UWamala ubhale kuTwitter esithi: “Malunga nevidiyo ejikeleza kumakhasi onxibelelwano yomntu othengisa uNsenene kwi-@UG_Airlines, ndithethe neenkokeli zenkampani yeenqwelomoya ukuba zithathe amanyathelo ngabasebenzi ababephethe ngethuba kusenzeka oku.” UGeneral Wamala wongamele inqwelo moya ukusukela oko waqeshwa ngo-2019, kwaye into yokugqibela anokuyinyamezela sisiphako kwinqwelomoya.
I-eTN ifumanise ukuba uPaul Mubiru, umrhwebi ekuthethwa ngaye, nangona ecele uxolo eluntwini, uye wabanjwa xa amagosa ezongenelelo kwindawo yokufika kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe sase-Entebbe eqala ukusebenza xa ebuya eDubai namhlanje, nge-19 kaNovemba, 2021 ngo-11 ngo-49. :XNUMXam. Uvalelwe kwisikhululo samapolisa kwisikhululo seenqwelomoya kwaye ulindele izityholo. I-Kampala City Traders Association (KACITA), ephantsi kwayo, nayo iye yawuphonononga lo mba ngokwenza isibhambathiso sokumohlwaya uMubiru okwangummeli wokuthenga egameni labarhwebi abaninzi besixeko.
Kwabanye, uMubiru unokubonwa njengegorha eligweba abakhweli- ubukhulu becala abarhwebi baseUganda abahamba indlela yaseDubai kurhwebo -kubandakanya isibini sabakhweli baseTshayina abathathe inxaxheba ekuthengeni obu bumnandi. Kwabanye, litshijolo elifanelwe yindelelo ngenxa yokuhlazisa isizwe. Kubo, isimilo esinjalo songamela abakhweli abahamba phantsi kwiibhasi zikawonke wonke apho ukushumayela nokurhweba ngezinto
ukusuka kwiziselo ezithambileyo, amayeza anamandla, uxinzelelo lwegazi, kunye nesifo seswekile zonke, zidla ngokukhutshwa ngoogqirha bemveli okanye abazichazayo ngaphandle kokuphazamiseka.
UMubiru unokuqinisekiswa yimbali ukuba inqwelomoya yenza okulungileyo kwisithembiso sayo sokongeza ezo critters zimnandi kwiispecials zabo zomoya.